Linn Ko: December 2013
Root with CF-Auto Root to All Samsung Galaxy Note3Model
Samsung Galaxy Note3Model အကုန်လုံး အတွက် CF Auto Root တွေပါ။
မူရင်း Link က Resume မရတဲ့ အပြင် Download Speed လည်း မတက်တော့ Down ရတာခက်ခဲပါတယ်။
Mediafire မှ လိုချင် သူများ အောက်မှာ ယူကြပါ။
Posted by Linn Ko at 3:09 PM No comments:
iOS7(iOS 7.0 to iOS 7.0.4) များကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်မည့် evasi0n 1.0.2(Beta) Tool ထွက်ရှိ
iOS7(iOS 7.0 to iOS 7.0.4) များကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်မည့် evasi0n1.0.2(beta) Tool ကို Update ထုတ်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ.အခုအသစ်ထွက်ဗားရှင်းကိုတော့ iPad2Wifi Reboot Loop ဖြစ်နေတာကို ပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်.အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Jailbreak Tool အသစ်ကိုအောက်မှာရယူနိုင်ပါတယ်..
Posted by Linn Ko at 1:41 PM No comments:
Labels: General, Mac, Windows
Android Phone/Tablet များအတွက် လက်ရှိ Update ထွက်ရှိထားတဲ့ Android ဖုန်း/Tablet ပေါင်းစုံ (တရုတ်ဖုန်း/Tablet များပါမကျန်) အားလုံးနီးပါးကို Root လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ VRoot v1.7.4 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Android 1.5 မှ Android 4.2 အထိရှိတဲ့ Android Devices ပေါင်းများစွာကို
Posted by Linn Ko at 10:00 AM No comments:
Downoad Photos from Facebook (In Official Facebook Application on Android)
အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ... Facebook က ပုံတွေကို Save လုပ်ပေးတယ့် ကောင်လေးပါ...
Facebook Software ကနေပဲ တိုက်ရိုက် Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်....
Facebook Software ထဲကနေ ကိုယ် လိုချင်တယ့် ပုံကို တစ်ချက် Click နှိပ်လိုက်ပြီး ပုံထဲကို ရောက်ရင်
Posted by Linn Ko at 12:28 PM No comments:
Iphone/Ipad/Ipod Touch ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် Angry Bird Go! ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Angry Bird ဆိုရင်ဖုန်းကိုင်သူတိုင်း မစိမ်းလောက်ပါဘူး..ဒီိဂိမ်းလေးကလည်း Angry Bird ကိုအသက်သွင်းခဲ့တဲ့ Rovio Entertainment Ltd
Posted by Linn Ko at 1:13 PM No comments:
NEED FOR SPEED Shift v2.0.8 Apk – Drive the world’s fastest cars and enjoy some of the highest performance racing action ever seen on Android.
Posted by Linn Ko at 11:43 AM No comments:
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် ဒီဇင်ဘာလ (၂၆)ရက် နေ့မှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Status Bar Mini Pro ဆော့ဝဲလ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. မိမိတို့ဖုန်းရဲ့ Status Bar ကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်လေး ဖြစ်ပါတယ်…ဒီဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး Status Bar မှာ
Posted by Linn Ko at 1:11 PM No comments:
ဒီကောင်လေးကတော့ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App လေးပါ ။
Notification တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင် ထားနိုင်ပါတယ် ။
ကိုယ်ပေါ်စေချင်တာတွေ ကို Select လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် ။
Posted by Linn Ko at 1:00 PM No comments:
Application တွေအကုန်လုံး တစ်ပြိုင်နက် သုံးနိုင်ဖို့ ဒီ App လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။
ကိုယ့်ဖုန်း ၊ တက်ဘလက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ App တွေအကုန် တစ်ပြိုင်နက်သုံးနိုင်ပါတယ် ။
တခြား App တွေဝင်ကြည့်နေရင်တောင်မှာ ကိုယ်ဖော်ထားတဲ့ App တွေက ပျောက်မသွားပါဘူး ။
Require Android 2.2 or Higher
Download Apk Here (39.8 MB)
Posted by Linn Ko at 12:10 PM No comments:
App Version : v1.3.2
Apk Size : 4.88 Mb
Posted by Linn Ko at 11:47 AM No comments:
App Version : v1.3.4
Apk Size : 1.65 Mb
App Version : v10.0.4
Apk Size : 4.43 Mb
Posted by Linn Ko at 11:37 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 3:38 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 3:31 PM No comments:
Fast it’s alsoasocial reader, you can organize your list and read-share all the stories from your
Feature စုံစုံလင်လင် နဲ့ Notes ကော Sketch ပါ ရေးဆွဲလိုသူတွေ အတွက် အသစ်လေးပါ...
SomNote has been nominated as an Offical Honoree of Utilities & Services from the 17th Annual Webby Awards, the internet equivalent of the Oscar Awards!
SomNote – “Note SomThing”
Posted by Linn Ko at 11:52 AM No comments:
ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံတွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ဒီ app လေးကို သုံးကြည့်လိုက်ပါ ……။
ကြိုက်တဲ့ ပုံကို ရွေးပြီး ဒီကောင်လေးနဲ့ ပြင်ပြီး Wallpaper လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
Posted by Linn Ko at 11:40 AM No comments:
Android ဖုန်းကိုင်သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ်.. 1Tap Cleaner Pro ဆော့ဝဲလ်က မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ Cache ဖိုင်တွေကို တစ်ချက်ထိရုံနဲ့ ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး/data file/call logs တွေကိုတော့ မိမိမလိုချင်လို့ ဖျက်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ
Posted by Linn Ko at 9:48 AM No comments:
အရင်တုန်းကဆို အလုပ်ကပြန်လို့ ကားပေါ်မှာ တတောက်တောက်နဲ့ အသံကြားလို့ကြည့်လိုက်ရင်
ဒီဂိမ်းလေးဆော့ဆော့နေတာ မှတ်မိသေးတယ် အခုလည်း 21 ရက်နေ့ကထွက်တဲ့ Version
အသစ်လေးပါ ။ တော်တော် စုံလာပါတယ် ။ နောက် ခုတင်ပေးထားတာက ပိုက်ပိုက်ခိုးပြီးသားဆိုတော့
Posted by Linn Ko at 9:57 AM No comments:
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် Zapya v 2.0 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Zapya ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး Phone Contacts , Photos , Videos , Softwares နဲ့ Games တွေကို ဖုန်းတစ်လုံးမှ တခြားတစ်လုံးသို့ လျင်လျင်မြန်မြန် ပေးပို့နိုင်မယ့် Sharing Tool
Posted by Linn Ko at 9:46 AM No comments:
Require Android 2.3 or Higher
Posted by Linn Ko at 5:39 PM No comments:
-What is ’2nd HOME’.
GO Launcher EX Rainbow Night Theme bring you the night rainbow – the colourful, magical and uncommon occurrence! Get the theme now to experience nature’s most beautiful gifts in the night – rainbows, stars, freflies, dadelions, etc.
Posted by Linn Ko at 11:24 AM No comments:
Music တွေကို DJ Mixing ဆွဲချင်တဲ့သူတွေအတွက် … အလန်းစား Mixer
Turntables DJ Mix v1.2.3
Posted by Linn Ko at 10:33 AM No comments:
Credit to Evasi0n and MMAS
iOS7မှ iOS 7.0.4 အထိ Jailbreak လုပ်နိုင်သော Jailbreak Tool ကို Evasi0n အဖွဲ့မှ ခရစ်စမတ်အမှီထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် iOS7မှ iOS 7.0.4 အထိတင်ထားသော iPhone/Pad/Pod Touch များအားလုံးကို Jailbreak လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ iOS7Jailbreak
Posted by Linn Ko at 10:20 AM No comments:
Clouds & Sheep Premium v1.9.3 Apk the fluffy and sweet balls of wool love it when you play and interact with them. Adorable as they may be, they´re not very smart. If there’sapoisonous mushroom, they’ll eat it. When the sun is shining, they’ll just stand there until they have a
Posted by Linn Ko at 1:15 PM No comments:
Plants vs. Zombies21.7.261732 MOD APK+DATA (Unlimited Gold Coins and Purchased Plans)
Posted by Linn Ko at 11:30 AM 1 comment:
Online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုတင်မယ်ဗျာ…….
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ဆော့ရတာလည်း အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ….
ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်တယ်ဗျာ….ဒီဂိမ်းလေးက ” Candy Crush ” တို့ လိုမျိုးဆော့ရတာ
လေဆိပ်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်ဖို့ လူကြီးမင်း အပေါ်မှာတာဝန် အပြည့်ရှိပါတယ်
Airport Scanner လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီဂိမ်းလေးက ထွက်ထားတာတော့ နဲနဲ ကြာပါပြီ ။
File Size သေးသေး နဲ့ တော်တော်ဆော့လို့ ကောင်းလို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်နော် မသိတဲ့ သူတွေ ခုပဲ ဒေါင်းပြီးဆော့ကြည့်
Rail Rush 1.5.0 MOD APK Unlimited Money(Christmas Update)
Posted by Linn Ko at 12:54 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 12:21 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 12:04 PM No comments: